Izindawo zeqhwa ezaziwa kakhulu eSpain | Izindaba Zokuhamba
Izindawo zeqhwa ezaziwa kakhulu eSpain
USusana Garcia | | España, General
Lutho isizini yezemidlalo yeqhwa iqala, nakubalandeli abaningi, sekuyisikhathi sokuyofuna indawo yokushibilika eqhweni ozochitha kuyo amaholide asebusika. Awudingi ukuya kude ukujabulela imithambeka enhle yeqhwa nezindawo zokungcebeleka ezigcwele imisebenzi nezindawo zokuzijabulisa, ngoba kusukela enyakatho uye eningizimu ungathola izindawo zokubhuka ze-ski ezibalulekile.
Ngalesi sikhathi sizobheka labo izindawo zokungcebeleka ezithandwa kakhulu e-ski eSpain, ukuze sikwazi ukujabulela izindawo zeqhwa kulobu busika. Futhi uma ungakayi kunoma yimuphi wabo, uzothola ukuthi kukhona impilo yeholide ngale kwamabhishi nelanga, ngoba ukuya eqhweni kungaba yinto ehlukile futhi emnandi. Manje kufanele ukhethe isiteshi lapho uzohlala khona.
1 IBaqueira Beret, eVall d'Aran
2 Okuhlelekile, e-Aragonese Pyrenees
3 ISierra Nevada e-Andalusia
4 ISan Isidro eLeón
IBaqueira Beret, eVall d'Aran
ESpain kunezindawo zokungcebeleka zokushushuluza ezingama-29, kepha kukhona eyodwa evelele ngaphezu kwazo zonke, futhi lokho iBaqueira Beret edumile. Wonke umuntu uzwile ngayo, njengoba ingenye yezindawo ezithandwa kakhulu yiqhwa zabantu abadumile, osopolitiki kanye nomndeni wasebukhosini. Akumangazi ukuya lapho futhi ubone ubuso obudumile.
Ngaphandle kokuba yindawo egcwele abantu abaziwayo, le ndawo yokushibilika eqhweni igqame ngokuba enkulu kunazo zonke ezweni maqondana nemithambeka nezikhala zokujabulela iqhwa. Kunemithambeka emakiwe engama-78 futhi kuze kufike kumakhilomitha ayi-138 okushushuluza nokushibilika eqhweni, kanye namakhilomitha ayi-7 okushushuluza kweNordic. Kunezindawo zabaqalayo, futhi imithambeka ngokujwayelekile ayinzima kakhulu. Noma kunjalo, zikhona imithambeka eyinkimbinkimbi njenge-Escornacabres noma iManaud, ngochwepheshe kakhulu.
Ngesikhathi uqeda ukushibilika eqhweni, kungenzeka futhi ukuthokozela zonke ezinye izinsiza, njengoba kunezindawo zokudlela, amathilomu nezinkundla zokudlala zeminyaka ehlukene. Emvelweni unga futhi hamba ukuvakasha kwemvelo, futhi akufanele uphuthelwe amadolobha amancane asezintabeni agqamile ngesitayela samaRoma sezakhiwo zawo ezindala, njengeSalardú noma i-Unha. Ebangeni nje elingamakhilomitha ayi-14 umasipala waseViella, okuyiwona obaluleke kakhulu endaweni.
Okuhlelekile, e-Aragonese Pyrenees
Lona I-Aramón-Formigal ski resort, EsesiGodini SaseTena. Kunemithambeka engama-97 namakhilomitha ayi-137 okushushuluza ezintabeni. Kodwa-ke, okuhlaba umxhwele kakhulu ngalesi siteshi inani elikhulu lemisebenzi ekhona, enethrekhi yezihlibhi yenja, amathrekhi amathathu e-ski cross, eyodwa yezimoto ezihamba eqhweni, isifunda sebhayisikili seqhwa, ithrekhi yeqhwa yesekethe ye-go-kart noma i i-ice skating rink. Emindenini kuhlala kunezikhala ezinjengezinkulisa, imisebenzi yokuzijabulisa noma isikole sokushushuluza.
Ezindaweni ezizungeze isiteshi kungenzeka futhi ukujabulela amadolobha amahle, njengeSallent de Gállego. Yidolobha elisentabeni elinezindlu ezinhle zamatshe nophahla lwama-slate. Kukhona nezikhala zemvelo, njenge-Ordesa y Monte Perdido Natural Park, noma iFrench Pyrenees National Park lapho weqa umngcele.
ISierra Nevada e-Andalusia
Ukusuka enyakatho siya eningizimu, lapho okwaziwa khona kakhulu Isiteshi seSierra Nevada. Ingabe i- esiteshini esinokuphakama okuphezulu kakhulu kulo lonke elaseSpain, enamamitha angu-3.282, futhi futhi eningizimu kakhulu kulo lonke elaseYurophu, njengoba itholakala e-Andalusia, amakhilomitha angama-30 ukusuka eGranada. Kulesi siteshi kunamakheshi angama-32 namathambeka amakwe u-119, kanye namakhilomitha ama-5 okushushuluza ezweni eliwela izwe. Kukhona nezinsiza zezingane, ngoba abantu bavame ukuya njengomndeni, benenkulisa nenkundla yokudlala.
Lapho sesijabule ngokuphelele emithambekeni yokushibilika eqhweni, siyakwazi ukubona indawo ezungezile. Lesi ngesinye seziteshi ezitholakala kahle kakhulu, ngoba siseduze nelinye idolobha eliheha kakhulu: I-Granada. Leli dolobha line-Alhambra neGeneralife njengezikhumbuzo eziyinhloko, ezikhumbula isikhathi se-Al-Andalus. Impela indawo eyinqaba, ngoba singasuka eqhweni siye elangeni ngosuku olulodwa, ngenxa yokusondela kwalo, ngakho-ke kuyisinqumo esihle kulabo abangafuni ukuyeka noma yini yalezi zinto ezimbili.
ISan Isidro eLeón
Lesi siteshi sinesizotha kakhulu futhi sincane kunesedlule, kepha sigqama ngokuba ngesinye sezikhulu kakhulu edolobheni. ingxenye esenyakatho-ntshonalanga yeSpain. Yisiteshi lapho abantu abavela eCastilla y León noma e-Asturias beya khona. Inamakhilomitha angama-31 emithambekeni yokushibilika ehlukaniswe imikhakha emine. Ngaphezu kwalokho, kunemithambeka yokushibilika eqhweni naseshibhini seqhwa engama-31, amalifti e-ski ayi-16, inkulisa kanye nesikole sokushushuluza. Okwenza kube okukhethekile ukuthi bahlela imizila emnandi yokuqwala eqhweni naseqhweni.
Kulokhu Isifunda sase-Alto Porma Ungajabulela indawo enhle kakhulu yemvelo unyaka wonke, lapho kwenziwa khona imisebenzi eminingi. Kusukela ekugibeleni amabhayisikili kuya ekukhuphukeni kwamatshe, ukugibela amahhashi, ukuhamba ngezinyawo noma ezemidlalo emanzini echibini lasePorma. Yize kulokhu kufanele ulinde isimo sezulu esihle, ujabulele indawo yokushibilika e-ski okwamanje.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » España » Izindawo zeqhwa ezaziwa kakhulu eSpain
Amabhishi amahle kakhulu ePhilippines
Ama-disco namaqembu amahle kakhulu eNew York